Manome tsiny ny banky fa tsy ny mpanendaka | Martech Zone
Talata, Janoary 6, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Misy ny fanafihana bilaogy sy tranonkala maminavina ny fahafatesan'ny Twitter taorian'ny kaonty marihina sasany voajirika. Ny sasany amin'ireo tranonkala dia miresaka momba ilay mpijirika amin'ny fahatalanjonana sy Twitter amin'ny fanamavoana (valanaretina ?!). Inona no tsy mety amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao?
Lazaina ny marina, hitako ny sasany amin'ireo hafatra navelan'ny mpijirika mba ho vazivazy. Tsy midika akory izany fa tsy tompon'andraikitra amin'ilay hacker aho. Nanapa-kevitra ny handrindra ny script izay nanafika fanafihana rakibolana iray tamin'ny mpandrindra Twitter izy. Rehefa vita ny fanafihany dia niditra izy avy eo. Rehefa niditra izy dia namerina teny miafina momba ny kaonty hafa. Rehefa avy nanova ny teny miafiny izy dia niditra tao amin'ny kaontin'izy ireo. Misy antsipiriany feno momba ny hack ao amin'ny Wired.
Ilay mpanao piraty aza dia naka sary ilay heloka ary namela làlana tsara hanaraka azy:
Ny Twitter dia tsy programa e-varotra mihazona ny angona momba ny carte de crédit anao. Tsy manana ny mombamomba anao momba ny fiarovana ara-tsosialy ny Twitter. Ny Twitter dia tsy misandoka na manandrana ho fonosana fanamarinana manerantany. Ny fikasan'ny Twitter dia tsy hamela izany hitranga mihitsy. Na dia mety tsy ampy aza ny fomba fanaovan'izy ireo ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fiarovana, dia tsy mbola diso izy ireo fa nisy olona nanapa-kevitra hanenjika azy ireo.
Alao an-tsaina ny hoe Twitter dia banky ary ny mpijirika no mpanendaka. Rehefa miasa ny mpangalatra banky mahita lesoka amin'ny fiarovana ary vaky ny vata fandatsaham-bola, omentsika tsiny ve ny banky? Tsia, tsy manao izany izahay.
Namaly ny Twitter. Raha nampandre ny Twitter momba ny fanitsakitsahana ny fiarovana ilay hacker ary tsy nanitsy azy ireo izy ireo, dia hampamoahiko izy ireo. Ilay hacker dia nanana fotoana hanaovana an'izany ... saingy tsy nanao izany.
Tags: tenimiafina titterTwitterhack hack
Jan 7, 2009 ao amin'ny 9: 45 AM
“Rehefa miasa mitady ny lesoka amin'ny fiarovana ilay mpanendaka banky ary vaky ny vata fandatsaham-bola, manome tsiny ny banky ve isika? Tsia, tsy izahay. ”
Izahay tsy manao !? Miasa ao amin'ny Bank of America aho. Matokia ahy fa hanao izany ny banky tanteraka omena tsiny noho ny lesoka ara-piarovana. Na avy amin'ny haino aman-jery na avy amin'ny mpanjifany.
Toy izany koa no azo lazaina amin'ny Twitter. Moa ve ny fahafatesany dia avy amin'ny fanafihana mahery vaika sy fianjerana noho ny mpijirika? Mety tsy izany. Fa ny fomba fijery amin'ireo mpampiasa azy fa tsy azo antoka ilay tranokala, heveriko fa hanilika azy ireo amin'ny tranokala SocNet sasany izay milaza fa azo antoka ny rafitr'izy ireo. Mety tsy izao, fa ny fotoana - ary ny fikirizan'ny hackers, izany hoe, fanapahana - dia handohalika amin'ny Twitter.
Jan 8, 2009 ao amin'ny 12: 45 AM
Manana teboka lehibe ianao. Halako anefa ny hanaiky an'izany! 🙂